Lionel Messi oo sheegay in sanadkan uu la tartamayo Neymar JR – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaLionel Messi oo sheegay in sanadkan uu la tartamayo Neymar JR
Hiiraan Xog, Mar 4, 2018:- Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuu Neymar JR u arko xiddiga kula tartami doona abaalmarinta Ballon d’Or sannadkaan, inkastoo ay xaqiiqadu tahay inuu Messi dhibsaday markii uu arkay Cristiano Ronaldo oo barbareynaya rikoorkiisii hanashada abaalmarinta Xiddiga Sannadka Adduunka.
Messi ayaa ku riyaaqaya 14 sanno oo uu ka tirsan yahay kooxda koowaad ee Barcelona, wuxuuna mudadaas ka mid noqday ciyaartoyda adduunka ugu wanaagsan.
Isaga iyo Ronaldo ayaa sagaalkii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey ku tartamayey abaalmarinta Ballon d’Or, xiddiga Real Madrid ayaana bishii December ee sannadkii tegay barbareeyey Messi isagoo markiisii shanaad hantay abaalmarinta Ballon d’Or.
Sannadkaan Messi iyo Ronaldo ayaa markale ugu cadcad hanashada abaalmarintaan, laakiin wararka ayaa soo jeedinaya inuu Messi doonayo inuu Koobka Adduunka u isticmaalo bandhiggii uu kula guuleysan lahaa abaalmarintaan.
Sida laga soo xigtay shabakadda Don Balon, Messi wuu ka warqabaa inuu Ronaldo markiisii seddaxaad oo xiriir ah Real Madrid ku hogaamin karo hanashada UEFA Champions League, balse wuxuu aaminsan yahay inay Barcelona sidoo kale qaadi karto koobabka La Liga iyo Copa del Rey
Sidoo kale Messi wuxuu qabaa inuu abaalmarintaan hanan doono haddii uu Argentina u qaado Koobka Adduunka. Sidoo kale Messi wuxuu aaminsan yahay in uusan Ronaldo rajo ka laheyn hanashada Koobka Adduunka marka la fiirsho tayada xulka Portugal balse wuxuu ka cabsi qabaa Neymar JR iyo xulka qaranka Brazil.
AKHRISO:- Dowlada Soomaaliya iyo dowlada Turkiga oo Heshiis kala saxiixday
DAAWO SAWIRADA: Maamulka Hirshabeelle oo Ciidanka AMISOM ku wareejisay hub laga qabsaday